musha nyika dzakabatana Politicians Nancy Pelosi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Nancy Pelosi Biography inoratidza Chokwadi paChidiki cheKecheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Mararamiro, Net Kukosha, Murume uye Hupenyu Hwega. Iyo ngano yezviitiko zvinoyemurika kubva paakange ari mwana kusvika paakatanga kufarirwa.
Hupenyu nekusimuka kwaNancy Pelosi. Mufananidzo Credits: BaltimoreSun uye CBS.
Ehe, munhu wese anoziva iye ndiye mukadzi wekutanga kubatira saMutauri weUS House yeVamiriri. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Nancy Pelosi's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, titange.
Nancy Pelosi Wenyaya Nyaya:
Nancy Patricia Pelosi akazvarwa pazuva re26th raKurume 1940 kuguta reBaltimore muUSA. Ndiye wekupedzisira pavana vatanhatu vakazvarwa naamai vake, Annunciata M. "Nancy" D'Alesandro uye kuna baba vake, Thomas D'Alesandro Jr.
Mukadzi wezvematongerwo enyika ane simba inyowani nyika yeAmerica asi havazi vazhinji vanoziva kuti vabereki vaNancy Pelosi ndevekuItaly. Zvakare, waiziva here kuti Nancy akakurira muBaltimore pamwe chete nevakoma vake vatanhatu vakuru anoti; Thomas, Franklin, Roosevelt, Hector, Nicholas naJoseph?
Mufananidzo wehudiki waNancy Pelosi (akabatwa mumaoko amai vake) nababa vake pamwe nevakoma vakuru. Mifananidzo Credits: BaltimoreSun.
Kukura kuBaltimore, Nancy ndiye ega mwanasikana uye nhengo yekupedzisira yemhuri yake. Kuve neakawanda kwazvo echirume manhamba aive akamukomberedza aive akakwana kukurudzira kutya asi kurerwa kwaNancy nezvematongerwo enyika uye zvechitendero kwakamudzidzisa hunyanzvi hwekudzivisa kutyisidzira uye nekunzwira tsitsi nyika yakamupoteredza.
Kutanga nekurerwa kwaNancy mune zvematongerwo enyika, vabereki vake vaive zvakanyanya mune zvematongerwo enyika. Muchokwadi, baba vaNancy vaive congressman panguva yekuzvarwa kwake. Kudivi rake, amai vaNancy vaive murongi wemadzimai eDemocratic. Pamwe chete, ivo vakadzidzisa Nancy kukosha kwenzvimbo dzekudyidzana panguva yehupenyu hwake hwepakutanga.
Social Networking: Unogona kuona mudiki Nancy nevabereki vake vakakwira muchigaro chekumashure chemota ino yemuchira? Chikwereti: CBS.
Vabereki vaNancy Pelosi vaive vachiitawo maKatorike nechikamu chavo vachishuvira kuti mwanasikana wavo mumwe chete apedzisire ave mumusangano. Nekudaro, Nancy akange asingafarire kuve sista. Kunyange zvakadaro, aigara achienda kumisasa kuSt. Leo Mukuru uye ainzwira tsitsi vanhu vemunharaunda vaiuya vachigogodza kumba kwavo kuBaltimore kuzotsvaga chikafu kana nyasha kuna baba vake vane simba.
Dzidzo yaNancy Pelosi uye Basa Rekuvaka:
Kunyangwe paakange asiri pamba uye paramende yake yemuno, Nancy aiwirirana zvikuru nemirairo yechitendero sezvo yaive chikamu chezvidzidzo zvake paMusangano weNotre Dame, vese vasikana veKatorike chikoro chepamusoro muBaltimore.
Mufananidzo usingawanzo wepo wezvematongerwo enyika unowedzera panguva yake yechikoro chesekondari. Chikwereti: BaltimoreSun.
Hapana kana mumwe wekuti atadza kuona nezvezvaanofarira, Nancy akaenderera mberi nekubatanidza pakuvaka kwake kweudiki mune zvematongerwo enyika nekuwana degree reBachelor of Arts musayenzi yezvematongerwo enyika paVictoria College muWashington, DC kirasi ya1962.
Makore Ekutanga aNancy Pelosi mune Zvematongerwo enyika:
Nancy asati apedza kudzidza aive atove mune zvematongerwo enyika uye akange aripo pakero yekugadzwa kwaJohn F.Kennedy paakapika semutungamiri weUS muna Ndira 1961.
Aive pakero yekutanga kwaJohn F. Kennedy muna 1961. Chikwereti: BusinessInsider.
Mumakore akatevera, Nancy akashanda semudzidzi akapedza kudzidza revamiriri Daniel Brewster naSteny Hoyer vasati vatamira kuSan Francisco uko rwendo rwake rwezvematongerwo enyika rwakatanga nemwoyo wose.
Nancy Pelosi's Biography- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Paive kuSan Francisco apo Nancy akazove nhengo yeDemocratic National Committee kuburikidza nesarudzo. Mushure meizvozvo, akatanga kushomeka zvishoma nezvishoma munzira yake yezvematongerwo enyika. Neraki, shanduko yekukwira kwaNancy yakauya nekukurumidza mugore ra1986 apo mukadzi anorwara weCongress - Sala Burton akati aisazokwikwidza sarudzo zvakare.
Pane kudaro, akaudza maDemocrat kuti atsigire Nancy semutsivi wake. Sala paakapa mweya muna 1987, maDemocrat akapa Nancy rutsigiro rwakawanda rwakamuona achibudirira Sala semumiriri weCalifornia yechishanu. Akatora mhiko yekushanda pasina nguva refu panguva yechiitiko chakakomba chaive nababa vake vakasungwa wiricheya varipo.
Yakanga iri nguva yemanzwiro kuna baba vake vakasungwa-wheel-chair sezvo ivo vakaita mhiko yehofisi muna 1987. Chikwereti: BhizinesiInsider.
Nancy Pelosi's Biography- Simuka Mukurumbira:
Kwete mumwe wekuzorora pamaoiri ake, Nancy akasimuka nekukurumidza mune zvematongerwo enyika zveDemocrat achichengeta chigaro chake mumba mevamiriri. Nancy achiri kwairi, akashanda pane imba Kupiwa uye Intelligence Committee vasati vava iyo House yekutanga vakadzi vashoma chikwapuro muna 2001.
Pakatungamira Mutungamiriri Wechidiki, Dick Gephardt kubva kuCongress kunotsvaga danho reDemocratic musarudzo dzemutungamiri wenyika 2004, Nancy akaitwa mutsivi wake uye ndokuva mukadzi wekutanga kutungamira bato rakakura muImba. Anenge makore maviri gare gare mu2006, maDemocrat vakatora kutonga kweImba uye vakasarudza Nancy semutevedzeri wavo pachinzvimbo chekutaura.
Nancy akatasva mafungu pane maDemocrats kusatsigira kutsigira kukunda Republican John Boehner uye akava mukadzi wekutanga, wekutanga eCalifornian pamwe ne wekutanga wemuItaly-American kubata Iyo Speecheship. Kunyangwe Nancy akarasikirwa chinzvimbo muna 2011 apo maDemocrats akave mashoma, akawana zvakare chinzvimbo chake muna 2019.
She was Spika, vakadzoka saSpika uye vachiri kutaura panguva yekunyora iyi bio. Chikwereti: DailyMail.
Iye achiri mutauri wemba panguva yekunyora uye anoenderera mberi kurwira kwake kuti awedzere kubhadharwa kwevashandi kuburikidza nekukura kwakasimba kwehupfumi pamwe nekucheneswa kwehuori kuita kuti Washington ishande kune vese. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Nancy Pelosi Murume uye Vana:
Ari kure nemabasa ake ekuita muCongress, Nancy mukadzi akatendeka kumurume wake Paul Pelosi. Ivo duo vaive vese vadzidzi vepakoreji pavakasangana uye vakatanga kufambidzana. Vakaenderera mberi nekusungira banga muna 1963 uye vakaita vana vashanu mumakore matanhatu.
Waona here iyi foto yaNancy pazuva remuchato wake naPaul? Chifananidzo Chemifananidzo: Pinterest.
Vana vaNancy Pelosi vanosanganisira; Corinne (muridzi wehotera), Christine (munyori), Paul (muzvinabhizinesi) pamwe naJacqueline naAlexandra.
Iye zvino pachikamu chake, murume waNancy Pelosi Paul ibhizimusi mogul. Iye ari mubhodhi remasangano makuru, anotarisira epamusoro-soro masitendi epakati pakati pevamwe vanoita mari. Muchato wake naNancy wapfuura makore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa uye anoverengeka pakati pemumwe wevanhu vakakurumbira vekuAmerican akareba marital Union. Iko hakuna kuramba chokwadi chekuti ivo vaviri vakagadzirirwa mumwe nemumwe. Ona mufananidzo wemhuri yaNancy Pelosi- murume wake, vana uye vazukuru pazasi.
Nancy Pelosi aine vana vake nevazukuru. Chifananidzo Chemifananidzo: Twitter.
Hupenyu Hwemhuri hwaNancy Pelosi:
Nancy Pelosi ndiani asina mhuri uye angave akazovei dai asina kuzvarwa kune vezvematongerwo enyika? Gara kumashure apo isu tichikuunzira chokwadi nezve nhengo dzemhuri yemhuri yaNancy kutanga nevabereki vake.
VERENGA Kamala Harris Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Nezve Baba vaNancy Pelosi:
Thomas D'Alesandro Jr akazvarwa muna Nyamavhuvhu 1, 1903. Iye anobva kumhuri dzemhuri dzeItaly uye aive wezvematongerwo enyika kwenguva zhinji yehupenyu hwake, nemahofisi ake anozivikanwa ari Mumiriri weUS kubva kuMDC yematatu kongiresi (3-1939) zvakare sa meya weBaltimore, Maryland (47-1947).
Kusvika pakufa kwake muna Nyamavhuvhu 1987, baba vanotsigira ve6 vakave neukama hwepedyo nemwanasikana wavo Nancy uyo anokudza ndangariro yake nezvaakabata muCongress.
Baba vaNancy Pelosi Thomas Thomas D'Alesandro Jr. Image Chikwereti: Twitter.
Nezve Amai vaNancy Pelosi:
Amai vaNancy Annunciata M. “Nancy” D'Alesandro anobvawo kuItaly. Muchokwadi, iye akazvarwa kuguta reCampobasso muSouth Italy. Aive Annunciata uyo akadzidzisa Nancy zvimwe zvekushamwaridzana pasocial network uye akazova nemukurumbira mukurarama muvematongerwo enyika. Nancy anoenderera mberi achikudza Annunciata nekumuzadza iye nesimba rakaringana rerudo rekurera vana nerudo.
Mufananidzo wehudiki waNancy Pelosi naamai vake Annunciata. Mufananidzo Chikwereti: DailyMail.
Nezve vana vaNancy Pelosi:
Nancy akakura aine vakoma vashanu. Ivo vanosanganisira Thomas, Franklin, Roosevelt, Hector, Nicholas naJoseph. Thomas akange ari gweta uye vezvematongerwo enyika vakashanda sa meya wegumi nemana weBaltimore kubva muna 5 kusvika 43 apo Hector aive mabharani wedare. Vaviri Thomas naHector vanonoka asi zvisina zvakawanda zvinozivikanwa nezvevamwe vese vana vaNancy Pelosi panguva yekunyora kwake biography.
Nancy Pelosi mukoma wedangwe Thomas aimbovewo meya weBaltimore sababa vavo. Mufananidzo Chikwereti: CBS.
Nezve Hama dzaNancy Pelosi:
Nezve Nancy Pelosi madzitateguru uye hama, vanasekuru vababa vake vaive Tommaso "Thomas" Fedele D'Alessandro naAntoinette Maria / Mary "Annie" Petronilla. Padivi reripi, sekuru vaamai vaNancy naambuya vake vaive Nicola Lombardi naConcetta / Concettina Milio / Million. Amainini vezvematongerwo enyika vanosanganisira Verdula Minnie, Jessie Granese naMary Cardegna. Nekudaro, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini vaNancy. Uye zvakare haasi marekodhi ehama dzake, vazukuru uye babamunini.
Hupenyu Hwega hwaNancy Pelosi:
Ngatisimukirei kune izvo zvinoita kuti Nancy Pelosi arege uye chimiro chehunhu hwake kudarika zvematongerwo enyika. Wakanga uchiziva here kuti wake zodiac chiratidzo ndiAries? Anoshingairira, anoshanda nesimba, anoshanda nesimba uye anoratidza shungu dzakanyanya mune chero chinhu chaanogadzika pfungwa dzake.
Passion uye kubhururuka simba ndizvo zvimwe zvezvimiro zvinotsanangura iye munhu. Mufananidzo Wemifananidzo: CNN.
Uye zvakare, Nancy haana matambudziko nekuburitsa chokwadi nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika. Kufarira kwevezvematongerwo enyika uye zvekuvaraidza zvinosanganisira kuverenga, kugadzirisa crossword mapuzzle, kumwa mvura inopisa nemon uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Nancy Pelosi's Lifestyle:
Nancy ane mambure anodarika emadhora gumi nematanhatu emamiriyoni izvo zvinoita kuti ave pachinhanho chegumi nenhatu pakati pevanhu vakapfuma kwazvo nhengo dzeCongress. Kuwanda kwehupfumi hwaNancy kwakatangira mumabhizinesi akabatanidzwa aanomhanya nemurume wake kuwedzera kune mihoro nemubhadharo waanotambira kubva angangoita makumi maviri emakore emabasa emutemo.
Nekudaro iye anorarama hupenyu hwoumbozha nemurume wake sezvazvinoonekwa mukukosha kweimba yavo yemamiriyoni akawanda emadhora paSan Francisco. Kuve iye wechitatu munhu mutsara wekutevera kune US purezidhendi, Nancy haana dambudziko rekubhururuka jets pamutero mari yemabasa akakosha. Uye haapere mumotokari dzakatenderwa nedzemunhu oga yekufamba munzira dzakanaka dunhu rake.
Maonero emuchadenga uye echikamu cheimba yaNancy kuSan Francisco. Image Chikwereti: WealthyGorilla.
Chokwadi chaNancy Pelosi:
Kuputira yedu Nancy Pelosi humwana nyaya uye biography pano zvishoma zvinozivikanwa kana Untold chokwadi nezve wezvematongerwo enyika.
Chokwadi # 1 - Democrat Kubva Zuva Rekutanga:
Kana Nancy achiri mudiki, iye republican akamupa toy toy (chiratidzo chedu Republican) sechipo. Kunyangwe Nancy aive mudiki kwazvo kuti anzwisise zasi kwechipo, iye haana kuchigamuchira.
Nancy muKatorike anoshanda. Kufanana nevaKristu vese vechokwadi, Iye anoti anotenda muna Mwari mumwechete wechokwadi uye anotarisira kumuka kwevakafa neupenyu hwenyika huchauya.
Haisi nguva dzese dzaunosvika kuti uone mufananidzo wake muchechi. Nakidzwa neizvi zvichiripo. Image Chikwereti: TheGuardian.
Chokwadi # 3 - Yakanaka Fundraiser:
Wanga uchiziva here kuti Nancy akanaka fundraiser? Muchokwadi, iye haana kana mashoma pasi pehafu yebhiriyoni-emadhora kuzita rake mukutsvaga mari kwemaDemocrat. Haasi iye anokosha?
Zvinonakidza kuziva kuti Nancy akagovana gore rimwechete rekuzvarwa naJohn Lennon. 1940 raive zvakare iro gore Kudzvinyirira Mukuru, Starring Charlie Chaplin hit cinema. Zvakare, raive gore iro Franklin D. Roosevelt akakunda sarudzo kuti ave mutungamiri wechitatu-wechitatu muUnited States.
Mbiri mbiri dzegore 1940. Image Credits: IMDB uye NewYorkTimes.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Nancy Pelosi Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. Atbiography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!